Cubot X30 hadda waa rasmi: kamarad 48 MP leh AI iyo 128 GB oo keyd ah | Androidsis
Cubot, waa shirkad suuqa ku jirtay dhowr sano, waxay ku guuleysatay inay noqoto mid muhiim ah farqiga u dhexeeya isticmaaleyaasha raadinaya taleefannada casriga ah ee la awoodi karo, laakiin adigoon ka tanaasulin waxtarka noocyada ugu sarreeya ee aan hadda ka heli karno suuqa.
Soo saaraha Cubot ayaa hadda bilaabay sharadkiisa cusub sanadkaan suuqa. Waxaan ka hadlaynaa Cubot X30, oo ah terminal aan raacin isbeddellada caadiga ah ee suuqa, laakiin sii socda oo fuliya illaa 5 kamaradood oo leh Sirdoonka Artificial.
Haddii aan ka hadalno tayada kamaradaha Cubot X30, waxaa muhiim ah in la ogaado taas midka ugu weyn wuxuu na siiyaa qaraarka 48 MP waxaana soo saaray Samsung. Kaamirooyinka intiisa kale ee terminalkani na siinayo waxay ka kooban yihiin 16 MPX module-aad u ballaadhan oo ballaadhan, muraayad 5 MP ah, 2 MPX oo u shaqaysa sida dareeraha qotada dheer iyo tan ugu dambeysa ee 0.3 MPX oo u shaqaysa sidii nal dareeraha.
Kamaradda hore waxay ku habboon tahay sawir-qaadista, maaddaama ay na siinayso xallinta 32 MP iyo sidoo kale isku-darka nidaamka furitaanka wajiga Haddii aan ka hadalno shaashadda, Cubot X30 wuxuu isku darayaa a 6,4 shaashad inji waa xallinta Full HD + (2.310 × 1080).
Si loo maareeyo aaladda, Cubot wuxuu ku tiirsanaa Helio P60 processor oo ka socda MediaTek, processor 8 GHz 2.0-core ah oo lagu soo saaray 12 nn. Batariga, oo ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee isticmaalayaasha badankood, wuxuu gaaraa 4.200 Mah, kaasoo noo ogolaanaya inaan ku raaxeysano aaladdan waqti dheer annagoo aan ka walwalayn batteriga.
Cubot X30 cusub waxaa maamula Android 10, sidaa darteed waxaan awoodi doonnaa inaan ku raaxeysano dhammaan wararka la yimid noocaan ah Android sida qaabka mugdiga ah, kontaroolada tilmaanta oo la hagaajiyay, kontaroolada asturnaanta oo dheeraad ah ...
Haddii aan ka hadalno isku xirnaanta, Cubot X30 waa La jaan qaada shabakadaha 4G / LTE, wuxuu isku daraa Bluetooth 4.2, NFC chip iyo GPS. Waxaa lagu heli karaa midabyo cufan oo madow, buluug iyo cagaar ah iyo 128 iyo 256 GB oo keyd ah.
Qiimaha terminal-kan wuxuu ka bilaabmayaa $ 149 loogu talagalay nooca 128GB ee keydinta iyo $ 179 oo ah nooca 256 GB iyo waxaa laga heli doonaa laga bilaabo Luulyo 27 Aliexpress.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Shiinaha Shiinaha » Cubot X30 hadda waa rasmi: kamarad 48 MP leh AI iyo 128 GB oo keyd ah
Mozilla's Firefox VPN Hadda waxaa laga heli karaa Gobol ahaan Android